हट सेक्सी नायिका माला भन्छिन ‘केटाहरू गधाजस्ता लाग्छन्’ – Complete Nepali News Portal
हट सेक्सी नायिका माला भन्छिन ‘केटाहरू गधाजस्ता लाग्छन्’
March 10, 2017	35,949 Views
फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौँ’मा अभिनयको अनुभव सँगालेकी माला लिम्बूको डेब्यू फिल्म भने ‘वन वे’ हो । त्यसयता उनले ‘रातो घर’ र ‘पर्व’ मा अभिनय गरेकी छिन् । केही म्युजिक भिडियो र ¥याम्प सोको अनुभव पनि बटुलेकी माला नेपाली नेटबल टिमको पहिलो कप्तान पनि हुन् । उनीसँग सामीप्यराज तिमल्सेनाले अन्तरंग कुराकानी गरेका छन्ः
तपाईंका फिल्म हलसम्म जान गाह्रो मान्दा रैछन् है ?
त्यस्तो हैन होला । ‘रातो घर’ त हो म लिडमा खेलेको । ‘गुडबाई काठमाडौँ’मा त म गेस्ट रोलमा छु । ‘पर्व’को जम्मा एक हप्ता भयो सुटिङ भएको । एउटा दुइटा फिल्म ढिला रिलिज भयो भन्दैमा मालाको फिल्म रिलिज नै हुँदैनन् भन्नुभो भने मलाई कसले फिल्ममा लिन्छ ?
तर, डेब्यू गरेको समयको हिसाबले तपाईंका फिल्म कमै हुन् । दुई वर्षमा मान्छेले १० वटा फिल्म भ्याउँछन् ।
म टिपिकल हिरोइन लुकको छैन नि त । मंगोल अनुहार भएको हामी जस्तोलाई सुहाउने भूमिका कमै हुन्छन् स्क्रिप्टमा । तर, यसको मतलब अफर नै नआएको भन्ने हैन । केही फिल्ममा अफर आएका थिए तर मैले गरिनँ ।
केहीमा पारिश्रमिकमा कुरा मिलेन । केहीमा समय मिलेन । फिल्ममा आबद्ध भएपछि त्यो चरित्रलाई भित्रबाटै आत्मसात् गर्न मलाई समय चाहिन्छ । यसका लागि म कम्तीमा पनि एक डेढ महिनाको समय लिन्छु । तर, जजसले फिल्म अफर गर्नुभयो, सबैले लास्ट आवरमा । त्यही भएर गरिनँ ।
हिरोइन बन्ने पहिलादेखिकै रहर हो ?
हैन । म सिंगापुरमा जन्मिएर र त्यहीँ ए लेभलसम्म पढेकी केटी हुँ । सिंगापुरमा हुँदासम्म बरु मलाई खेलकुदमा रुचि थियो । फुटबल, भलिबल, नेटबल सबै खेल्थेँ । विकेन्डका तीन दिनमा बेलुकी ७ बजे हिन्दी फिल्म देखाइन्थ्यो । त्यो बेला रमाइलोका लागि हेरिन्थ्यो । तर, हिरोइन नै बन्छु भन्ने गरी चासो चाहिँ थिएन । बरु दिदीहरू हिरोइन बन्छु भन्थे ।
संयोगले नै भन्नुप¥यो, आमाबुबाको इच्छा उनीहरूको बच्चामा पनि सर्छ रे भन्ने सुनेकी थिएँ । मेरो ममी हिन्दी फिल्मको डाइहार्ड फ्यान हुनुहुन्थ्यो । सलमान उहाँको सबैभन्दा फेभरेट एक्टर । हामी तीन जना दिदी बहिनी र एउटा भाइ छौँ । हाम्रो नाम नै हिन्दी कलाकारको नामबाट राखिएको । मेरो आफ्नै नाम माला सिन्हाबाट राखिएको हो भने भाइको नाम सलमान लिम्बू हो । जेठी दिदीको नाम ममता हो, ममता कुलकर्णीको नामबाट राखिएको । माइली दिदीको नाम चाहिँ डिम्पल हो, जुन डिम्पल कपाडियाबाट राखिएको हो । हाम्रो घरभित्र त सिंगो बलिउड छ ।
‘गुडबाई काठमाडौँ’ मा कसरी जोडिन पुग्नुभयो ?
हाम्रो परिवार सन् २००५ मा सिंगापुरबाट धरान फक्र्यो । म एक वर्षपछि मात्र फर्कें, किनकि म ओ लेभलको अन्तिम वर्षमा थिएँ । सिंगापुरमा आफ्नै हिसाबले बाँचिरहेको मान्छे, मलाई धरान एकदमै साँघुरो लाग्यो । त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ । धरानमा हुँदा नै मैले केही म्युजिक भिडियो खेलेकी थिएँ । गायक नरेन लिम्बूले पहिलो म्युजिक भिडियो अफर गरेका थिए । तर, फ्रिमा खेल्नुपर्छ भने । त्यही भएर गरिनँ । पछि सपन श्रेष्ठको म्युजिक भिडियो गरेँ । यही म्युजिक भिडियोमा हेरेर प्रेम सुब्बाले ‘गुडबाई काठमाडौँ’का लागि अडिसन दिन आऊ भन्नुभएको थियो । तर, पैसा पनि कम, रोल पनि किस गर्नुपर्ने खालको भनेपछि गर्दिनँ भने । म काठमाडौँ आएर एयरहोस्टेस पढिरहेकी थिएँ । त्यो कम्प्लिट गरेपछि डोमेस्टिक एयरलाइन्समा त चान्स पाएको थिएँ तर इन्टरनेसनलमा मात्र गर्छु भनेर गरिनँ । त्यसपछि मेनपावरमा काम गर्न थालेँ । एक वर्ष खोज्दा पनि नवीन सुब्बा दाइहरूले खोजेजस्तो केटी पाउनुभएको रहेनछ । फेरि बोलाउनुभयो । अडिसन दिन गएँ । ‘भाइ, दुई प्लेट मःमः र एउटा बियर ल्याऊ त’ भन्ने संवाद थियो । दुई प्लेट मःमःले हिरोइन बनायो ।
तपाईंलाई ‘आइटम गर्ल’का रूपमा ज्यादा चिनिन्छ नि ?
अँ, मैले पनि थाहा पाएँ । तर, मलाई सिंगापुर हुँदादेखि नै दुइटा रहर थियो । एउटा नेपालमा गएर आइटम गीत गर्ने र अर्को सलमान खानलाई भेट्ने । अस्ति एक जना निर्माता आइटम गरिदिनुप¥यो भनेर आउनुभएको थियो । मैले मानिनँ । तर, जम्मा दुइटा आइटम गरेको हो । कति चाँडै लेबल लगाइसकेछन् ।
अब आइटम कहिल्यै नगर्ने ?
सलमान खानसँग पायो भने गर्ने । अनि, अलि क्लासी टाइपको गीत र सेटअप भयो भने पनि गर्ने । नत्र नगर्ने ।
बजारमा अनुपविक्रम शाही र तपाईंको अफेयरको चर्चा छ । साँच्ची हो ?
मैंले त नरेन लिम्बूसँगको पनि हल्ला सुनेको थिएँ । तपाईंले सुन्नुभएको छैन ? सब वाहियात हल्ला हो । म सिंगल छु । उपयुक्त केटाको खोजीमा छु ।
तर, नेफ्टा अवार्डमा अनुप र माला नजिक हुँदा मलिना जोशी ‘जेलस’ भएको टाइपका हल्ला चलेका थिए ।
मलिना यो उद्योगमा मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी हो । अब आफैँ भन्नुस्, हल्लामा कति सत्यता रैछ ?
भनेपछि ब्वाइफ्रेन्ड छैन ? सीधै विवाह गर्ने ?
विवाहको बारेमा त सोचेको छैन । तर, नानी कहिले पाउने होला भनेर चाहिँ सोचिबस्छु । बिस्तार–बिस्तार उमेर ढल्कन्छ ।
विवाह गरेपछि नानी त भइहाल्छ नि । यसमा सोच्नुपर्ने कुरा के छ र ?
हैन, आजभोलि नै विवाह गरिहाल्ने योजना हैन । त्यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छैन । नानी चैँ मन पर्छ के ! त्यही भएर हो ।
कस्तो खालको केटा मन पर्छ ?
कन्फ्युजन छ हौ । मलाई त केटाहरू गधाजस्ता लाग्छन् । कस्तोलाई छान्ने छान्ने ? जस्तो गायिका बियोन्सेलाई हेर्नुस् न, कति कमिटेड छ ! तर, उसको प्रेमी जेजे अरू केटीलाई नहेरी बस्छ त ? यस्ता कुरा हुँदा चैँ विवाहसिवाहमा चाख लाग्दैन ।
पुरुषप्रति नेगेटिभ किन ?
नेगेटिभ नै त हैन…तर, माथि भन्याजस्तै हो के । केटाहरू कमिटेड नै हुन्नन् । कता कता मन डुलाइरा हुन्छन् । म त कोही मन प¥यो भने एकहोरो मन पराइरहन्छु । मलाई आमाबाले सानो उमेरदेखि नै इन्डिपेन्डेन्ट बन्नुपर्छ भनेर फ्रि छाडिदिनुभएको थियो । सिंगापुरमा १८ वर्ष नभई काम गर्न पाइन्न । तर, मैले १३ वर्षको उमेरमै छलेर काम गरेँ । यसले धेरै अनुभव दिएको छ ।
तपाईंलाई नेपाली नेटबल टिमको पहिलो कप्तान भनिन्छ । मोडलिङको मान्छे खेलमा कसरी पुगियो ?
एउटा, दुइटा मोडलिङ गरेपछि मलाई के लाग्यो भने मेरो लागि त यो पेशा सही रहेछ । किनकि, यसमा धेरै काम पनि गर्न नपर्ने, पैसा पनि राम्रो पाइने । म परेँ, अल्छी टाइपको केटी । त्यही भएर पनि मलाई मोडलिङमै फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो । तर, सन् २०१२ ÷१३ तिर होला, मलाई दीपक दाइ, सरनेम बिर्सिएँ, ले फोन गर्नुभयो र ‘तपाईं नेटबल खेल्नुहुन्छ रे हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । म सिंगापुरमा नेटबलको राम्रै खेलाडी थिएँ । हो भनेँ । उहाँले ‘त्यसो भए भेटौँ, नेपालमा पनि नेटबल टिम बनाउनुप¥यो’ भनेर आग्रह गर्नुभयो । मलाई पनि गरूँ न त भन्ने लाग्यो । मेरै नेतृत्वमा टिम बन्यो । हामीले आठौँ एसियन खेलमा भाग पनि लियौँ । तर, पाकिस्तानबाहेक सबैसँग हा¥यौँ । तपाईंहरूलाई थाहा छैन होला, अहिलेकी मिस नेपाल अश्मी श्रेष्ठ पनि नेटबल खेलाडी हो । हामीले सँगै एसियन गेम खेलेका थियौँ । अश्मीकै कारणले हो, म नेटबल खेल्न थालेको । किनकि, सँगै मोडलिङ गर्ने भएकाले अश्मीलाई म खेल्छु भन्ने थाहा थियो ।
तपाईं नेपालमा भएको आफ्नो करिअर र अवस्थादेखि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट नै छु भन्नुप¥यो । मैले भनिसकेँ– हिरोइनका रूपमा मसँग प्रशस्त फिल्म नहोलान् तर भएकामा मेरो उपस्थिति सार्थक बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ ।
तपाईं विदेश छाडेर यहीँ केही गर्न खोजिरहनुभएको छ । देशमा केकस्तो सम्भावना देख्नुभएको छ ?
मलाई पनि पहिला यहाँ बस्न गाह्रो भएकै थियो तर बिस्तारै आफूलाई एडजस्ट गर्दै गएँ । सबजना फ्युचर फ्युचर भन्छ । मलाई त आज बाँचे भइहाल्यो नि..पछिलाई भनेर के मरिहत्ते गरेको जस्तो लाग्छ । हो, यहाँ धेरै कुरा मिल्न बाँकी छ तर सजिलो पनि उति नै छ । मलाई त नेपालको शिक्षा प्रणाली चैँ पटक्कै मन परेन । क्रिएटिभिटीका लागि त ठाउँ नै छैन । जे पनि रटान । मलाई त पढाइ सक्न नै अति गाह्रो भो । प्लस टूमा नेपालीमा नै फेल भाको थिएँ । ट्युसन पढेर बल्ल बल्ल पास भाको ।
होली कत्तिको मन पर्छ ?
मन पर्छ । पोहोर साल करिश्मा दिदी (करिश्मा मानन्धर) कोमा होली खेल्न गएकी थिएँ । रमाइलो भो । धेरै जना चिनेकै थिइन । तर, होली खेल्न रङ नै दल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यो साल चैँ गोकर्ण रिसोर्टमा हुन्छु ।